Japan oo dayactireysa wadada gasha garoonka Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Japan oo dayactireysa wadada gasha garoonka Garowe
2nd September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxwaynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta Dhagax dhigay dayactir balaaran oo lagu samaynayo Bur Bur soo gaaray Hareeraha Wadada laamiga ah ee u dhaxaysa Garoonka Diyaaradaha iyo Halka laga soo galo Magaalada Garoowe ee Caasimada maamulka Puntland.
Mashruucaan waxaa Maalgalinaysa Dowladda Japan, Fulintiisana waxaa iska kaashanaya Hay’adda UNOPS iyo Hay’adda Wadooyinka Puntland, Dayactirka wadada waxaa ku guulaysatay Shirkada Al-Bashi Conistraction Company.
Dherarka wadada la dayactirayo waxa weeye 10-KM iyo 200-m oo ka soo bilaabanaysa Halka laga galo Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Garoowe waxana uu ku dhamaanaya Buundada Majabaxsi.
Madaxwaynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Mashruucani uu kamid yahay Mashruucyada Horumarineed oo Dowladdu ay kawado Guud ahaan Gobolada Puntland.
‘’Dayactirka Wadooyinku waa muhiim sababtoo ah wax walb oo la dhiso hadaan la dayactirin oo aan laga shaqaynin waxaa badanaya dhibta, Kharashka mar walba ku baxayana waa sii siyaadayaa ‘’Ayuu yiri Madaxwayne Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
‘’Waxaan rabnaa Puntland Shacabkeeda, Ganacsatadeeda, Dhalinyaradeeda, Culimadeeda, Mutacalimkeeda, Waayeelkeeda, Madax dhaqmeedkeeda in ay fahmaan inay jiraan wax-badan oo aynu gacanteena ku fushan karno dhibna aan nagu ahayn marka aynu uwada kacno waana in aynu cidkale ugu tiirsanaan‘’Ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Waxaa dhawaan imaan doona Khubaradii jidka isku xira Gaalkacyo iyo Garoowe ay maalgalinaysay EU iyo Hay’adihii ka shaqayn lahaa Mushruucaasi, mashruucyadii kale ee isugu jira Biyaha iyo Wadooyinka ee lay noogu deeqay iyana waxaan rajaynaynaa inay dhawaan bilowdaan’’Ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Madaxda Dowladda Jarmalka ku xigeenka Ambasadorka ayaa iyana dhawaan inoo imaanaya wakhti aan dheeren Howshana waxay u bilaaban Deg Deg, labada sano ee soo socota waxay nootahay in kaa bayaasha dhaqaalaha dalka ay yeeshan waji ka badalan wajiga hada ay leeyihiin‘’ Ayuu hadalka Raaciyay Madaxwayne Gaas.
Gaba gabadii Madaxwayne Gaas ayaa Tilmaamay in Dowladdu ay wali wado dadaalada lagu hormarinayo Puntland iyo Shacabkeeda, isagoona tusaale u soo qaatay in Dhawaan uu bilaabanayo dhismaha Dhabada ay diyaaraduhu ku ordaan ee Garoonka diyaaradaha Magaalada Boosaaso.
Muqdisho: Warbaahinta oo laga mamnuucay tebinta waraka Alshabaab
FAO oo taageereysa kaluumeysatada Banaadir & hareeraheeda